निर्मलाको हत्या गरेको प्रदीप रावलले बयान दिए , अब के होला ? - Maxon Khabar
Home / News / निर्मलाको हत्या गरेको प्रदीप रावलले बयान दिए , अब के होला ?
निर्मलाको हत्या गरेको प्रदीप रावलले बयान दिए , अब के होला ?
कञ्चनपुरकी बलात्कारपछि हत्या गरिएकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तका हत्यामा संलग्न रहेको प्रदीप रावलले प्रहरीलाई बयान दिएका छन । उनी निर्मलाका छिमेकी पनि रहेका छन
राजधानीबाट पक्राउ परेका प्रदीप रावलले हत्यामा संलग्न रहेको प्रहरीलाई बयान दिएका छन् । रावलले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ९सीआईबी० लाई बयान दिदै हत्या स्वीकार गरेका हुन् । बुधबारराति नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक ९आईजीपी० सर्वेन्द्र खनालको उपस्थितिमा भएको बयानमा रावलले घटना स्वीकार गरेको सीआईबीले बताएको छ ।
सीआईबीले प्रदीपसंग राति १० बजेदेखि बिहान २ बजेसम्म बयान लिएको थियो । सोही क्रममा रावलले घटनामा आफ्नो संलग्नता स्वीकार गरेका हुन् । घटना स्वीकार गरेपछि प्रहरीले रावलको डीएनए परीक्षणका लागि प्रहरी प्रयोगशालामा पठाएको जनाएको छ । डीएनए को रिपोर्ट शुक्रबार आउने छ ।
३ वर्षीया निर्मला पन्तको न्यायका लागि देशभर प्रदर्शन चर्किएपछि आईजीपी खनाल स्वयम्को उपस्थितिमा आरोपितको बयान लिने क्रम सुरु भएको हो । रावलसंगको बयानपछि कञ्चनपुरबाट थप केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको जनाएको छ । उनीहरुलाई अनुसन्धानका लागि काठमाडौं ल्याइएको छ ।
निर्मलाका छिमेकी आरोपी प्रदीप रावलका बुबाआमा भारतमा बस्दै आएका छन् । निर्मलाको शव भेटिएको दिनदेखि बेपत्ता भएका रावल चार महिनासम्म भारतमै बसेको र केही दिनअघि मात्र काठमाडौं आएको सूचना प्राप्त भएप्छी प्रहरीले प्रदीप रावलन्लाई पक्राउ गरेको थियो ।
रावललाई महाराजगञ्ज वृत्तमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको सिआईबीले जनाएको छ । बुधबार रातिको साविति बयानमा आईजीपी खनालका साथमा सिआईबी प्रमुख डीआईजी निरजबहादुर शाहीलगायत सहभागी भएका थिए । सीआईबीले रावलमाथिको थप प्रमाण डीएनए रिपोर्ट आएपछि हुने जानकारी दिएको छ । Annapurnapost बाट सभार